Ahoana ny fomba malama amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Betsaka ny hafetsen'ireo mpamorona izay manao ny valiny azony dia tsy azo ampitahaina amin'ireo ataon'ireo mpankafy. Na izany aza, amin'ny Internet dia azonao atao ny mahita ny sasany amin'izy ireo fa, manaraka ny torolàlana, dia tena mora atao. Ohatra, rehefa manatsara ny sisin'ny Photoshop.
Raha efa te hanao an'io foana ianao nefa mbola tsy nahalala ny fomba, eto izahay dia handao anao ireo dingana inona, nohazavaina tsirairay, mba hahafahanao milamina miaraka amin'ny Photoshop toy ny tena manam-pahaizana. Ka ho tsara lavitra noho izany ny valiny raha tsy izany.
1 Inona no vokatry ny fanalefahana?
2 Ahoana ny fomba malama amin'ny Photoshop
2.1 Sokafy Photoshop sy fisie
2.2 Fitaovana Frame
2.3 Manomboka milamina
2.4 Ahoana ny fomba malama amin'ny Photoshop: Atsimbadika
2.5 Tsindrio Delete
3 Atsaharo ny sisiny
4 Misy fomba hafa ve hampihenana ny sisiny amin'ny Photoshop?
Inona no vokatry ny fanalefahana?
Iray amin'ireo loharanom-pahalalana ampiasain'ny mpamorona sary maro amin'ny tetikasany ny anti-aliasing. Ny vokatr'io dia ny very ny zoron'ny sary, mamela vokany manjavona bebe kokoa, na rahona toa mamihina ilay sary mihitsy.
Fa maninona no ampiasaina io? Eny, satria tsara tarehy dia tsara kokoa izany; raha ny marina, ny valiny dia mampiavaka ny sary, ireo izay tianao hanome lanja bebe kokoa, ka izany no ampiasana azy hampifantoka ny saina amin'ny teboka manokana. Ankehitriny, ilaina ity sary ity mba afovoany ilay zavatra, satria raha tsy izany, ny vokany dia mety hampihena ny hamafin'ny sary, indrindra raha ampiasaina amin'ny vokany mahery (fa tsy malefaka).
Ohatra, alao sary an-tsaina, raha manangana pejin-tranonkala ianao, dia tsy maintsy apetrakao ny sarin'ireo vokatra. Ho tsara lavitra kokoa ireo raha apetakao amina oval, mifantoka amin'ny vokatra ireo, fa tsy asiana sary misy fiaviana izay tsy misy ifandraisany, na hoe mahitsizoro, dia toa tsy dia nisy fikarakarana firy. amin'ny famolavolana.
Ny sisiny malefaka amin'ny Photoshop dia iray amin'ireo asa mora indrindra azonao atao miaraka amin'ity mpamoaka sary sary matihanina ity, ary vitsy ireo dingana. Fa raha mbola tsy vitanao izany dia afaka manome anao fanajana kely. Noho izany, eto izahay dia hitarika anao tsikelikely mba hahafahanao manao izany amin'ny sarinao na sarinao manokana.
Sokafy Photoshop sy fisie
Ny zavatra voalohany tokony hataonao mba hialana amin'ny Photoshop dia ny fanokafana programa ary, miaraka aminy, sokafy ny sary tianao hiaraha-miasa. Manoro hevitra anao izahay mba hanananao an'io sary io ao anaty kapila mangatsiaka anao satria tsy mampiasa loharano be loatra ity fomba ity ary tsy dia hanana vintana intsony ianao, indrindra raha mavesatra loatra ilay sary.
Raha vantany vao nosokafanao izany dia miroso amin'ny dingana manaraka izahay.
Ny iray amin'ireo bokotra manan-danja indrindra raha ny amin'ny fanalefahana ny sisiny miaraka amin'ny Photoshop dia ny Frame. Raha manana ny baraovana Photoshop ianao dia ho hitanao ao izany. Ny ilainao dia ny manindry eo amboniny ary mitazona azy hanery anao hahazoanao Frame mahitsizoro. Ny teny hoe "malama" dia hiseho eo an-tampony, ka mila apetrakao fotsiny ilay tariby manalefaka (raha tianao hilamina kely na betsaka io).
Hanomboka hanalefaka sary, ny zavatra hataonao dia ny mamorona mahitsizoro kely, indrindra eo an-joron'ireo sary, mba hahafahan'izy ireo manjavona ary, miaraka aminy, tsy hahita azy intsony (mifangaro mangarahara na miaraka amin'ny loko aza. fotsy).
Raha vantany vao manao izany ianao dia aza manahy raha mahita mahitsizoro mitsivalana ianao, ara-dalàna (sy izay tokony hivoaka).
Ahoana ny fomba malama amin'ny Photoshop: Atsimbadika
Vantany vao vita ianao dia mila mandeha mankany Select / Invert. Izany dia satria ny safidinay dia tsy misy akony afa-tsy izay tianao, fa tsy ny sary iray manontolo.
Rehefa mamely azy ianao dia hijanona eo anelanelan'ny tsipika feno teboka ilay ampahany zorony.
Mila apetrakao amin'ny fotsy ny loko ambadika (na loko hafa mifototra amin'ny sary anananao sy ny vokatra tianao hamoronana miaraka aminy).
Ny dingana sisa tavela dia ny mamafa azy mba hahafahan'ny valiny farany tavela. Mazava ho azy, raha omenao hamafana im-betsaka ianao dia hanohy hanafoana ny sisiny araka izay itiavanao azy.
Atsaharo ny sisiny
Misy fomba iray hafa hanalefaka ny sisin'ny sary, na dia mety hisy fiantraikany amin'ny sary aza izy io, indrindra satria afaka mamafa ny faran'ny sary izy. Momba ny fanalefahana ny sisiny.
Vita izany, misokatra ny sary, amin'ny fisafidianana ny ampahan'ny sary tadiavinao (ilay tianao hijanona).
Manaraka, tsindrio Selection / Modify / Fade.
Any no hahitanao tariby manjavona. Izy io dia azo apetraka manomboka amin'ny 0,2 ka hatramin'ny 250, miankina amin'ny habetsaky ny fanirianao hanalefaka ilay sary.
Raha hitanao izany, rehefa mahatratra ny Ok ianao, ny zava-mitranga dia ny singa tadiavinao hijanona dia satria ny fandikan-teny no nandika azy. Ho an'izany, alohan'ny hamelezana an'i Fade, tsindrio Selection / Invert. Araka izany, rehefa tonga ny fotoana tokony hahafoana azy dia hanafoana izay rehetra mbola tsy voafantina teo aloha.
Misy fomba hafa ve hampihenana ny sisiny amin'ny Photoshop?
Ny marina dia eny, misy fomba hafa hanaovana azy, ary amin'ny alàlan'ny filalaovana ireo sivana sy vokany ananan'ny programa io. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe manana sary ianao izay anaovanao sarin'olona (biby, zavatra sns) ary tianao hampifantoka mivantana azy ny sainao.
Noho izany, tianao ny hisehoan'ny manjavozavo ny ambin'ny sary rehetra, na tsy hiseho fotsiny. Mba hanaovana izany, dia mamporisika anao izahay handeha amin'ny Sivana / Jiro. Fa maninona no any? Noho ny antony maro:
Amin'ny jiro dia azonao atao ny mamorona aloka izay mahatonga ny sary hahazo ny hazavana fotsiny amin'ilay ampahany tena mahaliana anao. Ary koa, tsy voatery ho lasa haizina maizina izy io, miankina amin'ny toerana hametrahanao ny jiro, azonao atao ny milalao ny mifanohitra amin'izany.
Hanana vokatra tany am-boalohany ianao. Ary tsara ny manalefaka ny sisiny amin'ny Photoshop, saingy manana olana izy ireo rehefa misy ambadika ireo sary ireo ary izany dia raha tsy tsara ataonao dia azo tapahina tsara.
Manome fikitika "mistika" kokoa ny sary ianao.
Raha ny fahitana ireo tara-pahazavana isan-karazany dia mamporisika anao izahay hanandrana azy rehetra hahita hoe iza no mety indrindra amin'ny valiny tadiavinao. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manova ny hamafin'ny jiro, ny orient ary ny vokatra azonao (satria azonao atao ny manova ny soatoavina).
Tsy manadio tsara ny sisiny izy io, fa amin'ny fanokafana bebe kokoa ny hazavam-pahazavana dia azonao atao ny manatratra an'io vokatra tadiavinao io, ary indraindray, mora kokoa ny manao an'io fomba io noho ilay efa nohazavaintsika teo aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba malama amin'ny Photoshop